Isibhedlela sifuna izihlobo zikaPhumlani Mkhize | News24
Isibhedlela sifuna izihlobo zikaPhumlani Mkhize
Kufunea abazali baPhelelani Aphelele Mohlokoane oneminyaka emine. Onolwazi kucelwa athinte usonhlalakahle uN Mtolo ku-033 342 1229.
ISIBHEDLELA i-Edendale sicela ukufuniswa izihlobo noma abangaba nolwazi olungaholela ekutheni kutholakale izihlobo zikaPhumlani Mkhize olinganiselwa eminyakeni engu-25 ubudala. Uthi ubehlala eCaluza ngakwaMenzi Tuck Shop naseSigodini ngakwaDinangwe Store. Onolwazi ucelwa aphuthume esibhedlela noma ashayele uMnu Wonder Ngubane ku-033 395 4323 / 4346 noma uNkk Samke Mncube ku-033 395 4020 ngezikhathi zomsebenzi.
KUCELWA umphakathi ukuba utheleke ngobuningi bawo emkhulekweni nenkozo okuzoba ecity hall edolobhini ngoMgqibelo wona lo ngo-2 ntambama. Le nkonzo izobanjwa ngaphansi kwesiqubulo esithi: Revival of Jesus Christ. Ngeminye imininingwane kungashayelwa ku-071 329 2893.
KUFUNWA umama kaSlindile Mbhele amshiya nogogo wakhe uLindiwe Thabethe ohlala kwaNdebeqheke e-Elandskop. Shayela usonhlalakahle uMahlobo ku-033 505 0083.
KUFUNWA uBongiwe Mdlalose ongumama kaSlindile Majola owashiya ingane noyise wayo uSphamandla Majola eTamboville. Shayela usonhlalakahle uMnu N Mchunu ku-033 392 8621.
KUFUNWA ubaba kaThondolwami Gumede ozalwa uNompumelelo Gumede ophinde abe umama kaZandisile kanye noSamkelo Gumede. Shayele uS Gumede ku-074 548 8838.
KUFUNWA ubaba kaBandile Zothani Madlala oneminyaka emgu-12 nokaSiphosethu Madlala oneminyaka eyi-8 abazalwa nguNtombifuthi Bertha Madlala waseSmero ongasekho. Kuphinde kufunwe ubaba kaLwazi Issa Ngema oneminyaka emithathu ezalwa uMbuliwe Veronica Ngema ongasekho. Onolwazi ngalaba kucelwa athinte usonhlalakahle uN Mtolo ku-033 342 1229.
KUFUNWA uSthabile Cele/Fatima Milanzi ongumama kaSphesihle Sithole. Ubaba womtwana uThulani Sithole. Shayela usonhlalakahle uN Madlala ku-033 392 8600.
IGREATER Edendale Residents Association imema wonke amalungu ayo ahlala kulezi zindawo eziphansi kwezigcemeni u-15. 16, 17, 19, no-22, okuyikwaMalinyana, Vegafontein, Jextention naseMaqeleni ukuba aphelele emhlanganweni zingu-17 kuMbasa ngo-2 ntambama lapho kuzodingidwa khona izinto ezifana nezikweleti zamanzi nokukhushulwa kwamarates ngokungeyikho. Sikhishwe usihlalo uZakhele Hlatshwayo otholakala ku-071 745 1423.